२० वर्ष पार गरेपछि महिलामा देखिन्छन् यस्ता परिवर्तन « Deshko News
२० वर्ष पार गरेपछि महिलामा देखिन्छन् यस्ता परिवर्तन
उमेरसँगै महिलामा हरेक खालका परिवर्तन आइरहन्छन् । यसबेलामा अनेक खालका स्वास्थ्य समस्या समेत उत्पन्न हुन सक्ने हुँदा स्वास्थ्य जाँच गराइराख्नु पर्ने चिकित्सकहरुको सुझाव छ । हामी यहाँ २० वर्ष पार गरेपछि महिलामा आउने ५ परिवर्तनबारे बताउँदैछौंः
२. युवतीमा देखिने अर्को समस्या— डन्डीफोर । हर्मोनमा हुने परिवर्तनका कारण डन्डिफोरका साथै छाला सुख्खा हुने समस्या समेत उत्पन्न हुनेगर्छ । तपाईँ यस्तो समस्याबाट पीडित हुनुहुन्छ भने चिल्लो खानेकुरा कम खानुस् । साथसाथै दिनको २ देखि तीन पटकसम्म अनुहार धुँदा उत्तम हुन्छ । यसले अनुहारमा चिल्लोको मात्रा कम हुन्छ र डन्डिफोरको समस्या हट्छ ।
३. उमेरमा परिवर्तनसँगै महिलामा देखिने अर्को परिवर्तन कपाल (रौं) हो । महिलाको गुप्तांग, जाती र पेटमा अस्वाभाविक रुपमा कपाल उम्रन सक्छ । यस्ता अस्वाभाविक कपाल हटाउनको लागि क्रिम या रेजको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । रेजरको सहायताले रौंलाई स्थायीरुपमा समेत हटाउन सकिन्छ ।
५. हर्मोनमा आउने परिवर्तनका कारण कपाल सुख्खा तथा जिंग्रिङ्ग बन्न पनि सक्छ । यस्तो बेला ३—४ चम्चा जैतुनको तेलले मालिस गर्दा उत्तम हुन्छ ।